ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »3အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ Profile ကို Creating ကြီးသောအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
အခုနောက်ပိုင်း, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာ. တဖန်သင်တို့ကစဉ်းစားလျှင်, ကသဘာဝကျပါတယ်. Hectic အလုပ်အချိန်ဇယားနှင့်အလုပ်များပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝတွေကိုတစ်စုံတစ်ဦးအဟောင်းလမ်းခရီးဦးကြိုပြုခြင်းသည်အလွန်အချိန်အနည်းငယ်အရွက်. သို့သော်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပြုဘူးသည်ထက်ကပြောသည် ပို. လွယ်ကူသည်. အောင်မြင်သောအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဖို့ key ကိုသင့်ရဲ့ profile တွင်တည်ရှိသည်.
Profile picture - ဤပုံရိပ်များကို. ထိုအရဲ့ရိုးသားပါစေသတည်း, အချို့သောသဘောတူညီချက်ကျူးနိုင်ပါတယ်. ကျွန်တော်ဝန်ခံမဆိုသည်ဖြစ်စေ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုအလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်အတွက်ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းအခန်းကဏ္ဍ. လွန်းပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစိတ်တွေတဲ့ပုံမှာ Choose. လည်း, အပြုံးများအလွန်ဖိတ်ခေါ်သကဲ့သို့သင်သည်သင်၏ဓာတ်ပုံထဲတွင်ပြုံးနေကြတယ်သေချာအောင်. ငါ့အကြံဥာဏ်သူတို့ cheesy ဖြစ်လေ့ကဲ့သို့လွင့် "selfie" ရိုက်ချက်များနေရန်ဖြစ်သည်. လည်း, သင်ရုပ်ပုံမှာပျောက်ဆုံး့ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်အုပ်စုရိုက်ချက်များမှဝေးဝေး. ဒီအကြံပေးချက်ကိုသင့်ရဲ့အဓိကပရိုဖိုင်းပုံကိုရောက်သွားပါမယ်. ငါသည်လည်းတစ်ဦးထက်ပိုဓာတ်ပုံ upload လုပ်ဖို့အကြံပေး. သင့်ရဲ့အမှုတွဲဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ, အုပ်စုရိုက်ချက်ပုံကိုထည့်သွင်းဖို့အခမဲ့ခံစားရ, ရိုက်ချက်ဖြင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, စသည်တို့ကို. "တစ်ဦးပုံကိုအထောင်အသောင်းသောစကားထိုက်သည်" ဝင်တစ်ဦးလူကြိုက်များဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုအသောစကားပြောခြင်းပြုစေ.
သင်ပုဒ်မအကြောင်း - သင့်ရဲ့ Profile picture သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ profile မှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဖြစ်ကောင်းစွာအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ. သင်မည်သည့် site ကိုချိန်းတွေ့ဘို့-sign up မလုပ်ခင်, သင့်ရဲ့ဝါသနာများစာရင်းတစ်ခုကိုဖန်တီး, အကျိုးစီးပွား, အားသာချက်, နှင့်အားနည်းချက်များကို. စာရင်းပြီးပြည့်စုံသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သင်မျှဝေလိုစိတ်သောကအရေးကြီးဆုံးပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ပါ. သင်သည်သင်၏အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်ထိုသူအချို့ဝေမျှဖို့လိုပေမည်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုဝါသနာနှင့်အကျိုးစီးပွားအပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြသေချာပါစေ. လည်း, ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်ကိုသင်နဲ့လိုက်ဖက်ကိုက်ညီမှုရှိတယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးတစ်ခုပေးတော်မူမည်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့အချိန်အများစုကိုဖြုန်းဘယ်လိုထည့်သွင်း. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆုံးနဲ့အရေး, သင်မည်သေချာပါစေ 100% ရိုးသားသော. ရိုးသားမှုမရှိရင်, သင်သည်သင်၏ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
အဘယ်အရာကိုသင်တစ်ဦးက Partner ပုဒ်မခုနှစ်တွင် Want - သင်အဘို့အ-sign up ကိုချိန်းတွေ့ site ကိုဤအပိုင်းကိုသို့မဟုတ်မဖြစ်စေ, သင်ကျိန်းသေသင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile ၌ဤထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်. တစ်ဖက်နိုင်ငံတွင်သင်သည်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ. ဝိသေသလက္ခဏာများမှတန်ဖိုးများနှင့်အကျင့်ဓလေ့ကိုသင်နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူသင်၏အသက်ကိုဖြုန်းချင်တဲ့မည်သို့ဥပမာအရာအားလုံးကိုရေးချပါ. သင့်ရဲ့စာရင်းသင်သည်ဤအပိုင်းကို compose စတင်တစ်ချိန်ကအဘို့အရှည်လျားသည်ဆိုပါကဟန့်တားခြင်းမရှိကြနှင့်, သင်တစ်ဦးက "လုပ်သို့မဟုတ်ချိုး" မဖြစ်ကြောင်းအရည်အသွေးတွေကိုထုတ်ပေါင်းပင်ဦးမည်. ဤအပိုင်းကိုရေးနေစဉ်အကြှနျုပျ၏အကွံဉာဏျအညီအမျှကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်အနာဂတ်လက်တွဲဖော်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေါ်သိပ်လေးလံအကြောင်းအရာနှင့်တစ်ဦးကပရိုဖိုင်းကိုသင်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဖြစ်ကြောင်းပြသ, အပြန်အလှန်သင့်အဘို့ရှာကြရာပေါ်လွန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတယ်တဲ့ပရိုဖိုင်းအနာဂတ်တစ်ခုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုဟန့်တားစေနိုင်ပါတယ်. လည်း, ဖတ်ပြီးသေချာသင်သက်သေပြပါစေ. Misspellings ဆိုချိန်းတွေ့ website မှာဝေးဝေးကိုသင်မရကြမည်. နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုတလျှောက်လုံး, သင်ပျော်စရာရှိသည်သေချာပါစေ! ဤအတွေ့အကြုံ Enlightened ဖြစ်ယူဆ, စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့, ဤမျှလောက်ပို.
အဘယ်မျှကို Safe ချိန်းတွေ့ဖြစ်